Abadlali abahlanu ababalaseleyo kumculo Ubuntu | Ubunlog
Abadlali abaMculo abahlanu abaphezulu boBuntu
UPablo Aparicio | | isiNxulumanisi, Ubuntu
Nanini na xa nditshintsha ikhompyuter okanye inkqubo yokusebenza, into endiyenza rhoqo (ubuncinci le yokugqibela), ndiye ndingene kwingxaki efanayo: umvelisi womculo wakho akandiniki yonke into endiyifunayo. Ezinye zinzima kakhulu, ezinye zilula kakhulu kwaye ezinye azinazo iindlela ezibalulekileyo kum. Ewe, ukuba kufuneka ndinyaniseke, le yinto engazange yenzeke kum ixesha elide kuba sele ndiyifumene Abadlali bomculo abaphambili kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza.
Ukufikelela kuzo zonke iimfuno, kule posi siza kuthetha ngeendlela ezi-5 Singafaka nakweyiphi na inkqubo yokusebenza Ubuntu esekwe. Ezinye zazo zikwiindawo zokugcina ezisemthethweni, ngelixa ezinye zingenjalo. Ngayiphi na imeko, unokuhlala ukongeza indawo yokugcina esemthethweni yeprojekthi nganye okanye ukhuphele isoftware .deb package. Siza kunye nezindululo ezi-5 ekufuneka wonke umsebenzisi we-Ubuntu azi.
1 Abona badlali babalaseleyo Ubuntu
1.6 Ibhonasi: Ukuphicothwa
Abona badlali babalaseleyo Ubuntu
Nguye Ubuntu umdlali ongagqibekanga yiyo loo nto ndiyibeka kwindawo yokuqala. Oko kwaye bendikade ndiyisebenzisa ixesha elide kwaye indikhonza ngokugqibeleleyo kule nto ndiyifunayo: umdlali ngaphandle kwengxaki ezininzi apho ndinokuba nelayibrari yam yomculo ehlelwe ngokugqibeleleyo.
Kuya kufuneka ndivume ukuba ndiye ndafumanisa uninzi lwezinto endizokuthetha ngazo kule post kuba iRhythmbox ayinanto ibalulekileyo kum: isilinganisi esivumayo ukuba nditshintshe iaudiyo ukuze isebenze kakuhle nakweyiphi na i-headphone yam. . Kodwa ngenye imini, ndidiniwe ukufaka ezinye iindlela ezingezizo ezomthonyama ezazingeyiyo i-100% kwinto endiyifunayo, ndikhangele ulwazi ngendlela yongeza isilinganisi kunye neBingo! Kungenziwa ngaphandle kwengxaki ngokuvula i-terminal kwaye uchwetheze lo myalelo ulandelayo:
Nje ukuba sifakelwe, kuya kufuneka sivale, sivule iRhythmbox kwaye singene kwisilinganisi kwizixhobo / Isilinganisi. Andifuni enye, kodwa nantsi ezinye iindlela.
Clementine Yinguqulelo eguqulweyo yomnye umdlali esiza kuyongeza kweli nqaku (Amarok), kodwa utshintsho lwenza ukuba lo mdlali abe lula kwaye abe nomdla ngakumbi kunenguqulo yoqobo. Ukongeza, unokukhetha okuninzi, njengokukwazi ukujonga ulwazi lomculi, ulwazi lwengoma, iingoma zomculo, izimbozo zealbhamu, nokunye okuninzi. Ukuba awuyithandi iRhythmbox, nokuba ungongeza into yokulinganisa kuyo, ndicinga ukuba into yokuqala ekufuneka uyizamile nguClementine.
Ukuyifaka, sebenzisa nje umyalelo I-sudo ifake ukufaka i-clementine
Ngamazwi akhe, sijonge "uMdlali oMiselweyo woMculo." Yi Inguqulelo yeLinux yesicelo seFoobar2000 kwaye ngumdlali ophelisa uninzi lweziphazamiso esinokuzifumana nakwezinye iisoftware zolu hlobo. Imfihlo okanye isizathu sokuba ube yi-DeaDBeeF yinto elula; dlala umculo kunye nenye into encinci.
Kwelinye icala, i-DeaDBeeF ibandakanya imisebenzi enje Inkxaso yokwenza uluhlu lwadlalwayo ulwenziwo, inkxaso ye-plugin, ukuhlelwa kwemethadatha, nokunye okuninzi. Ngaba ujonge into elula? Vavanya i-DeaDBeeF.
Ukuyifaka kufuneka siye iwebhusayithi yabo Khuphela ikhowudi yomdlali. Ukuba usebenzisa uguqulelo olusekwe ku-Ubuntu, khuphela nje iphakheji ye-32/64-bit .deb, uyiqhube, kwaye uyifake nesifaki sesoftware yakho.
Nangona ayilulo ukhetho lwam kude nayo, kuluhlu lwezicelo ze-Ubuntu andinakuphoswa yileyo iya kusebenza ukusuka kwisiphelo sendlela. Xa sithetha ngabadlali bomculo, leyo esinokuyisebenzisa kwisiphelo se-Ubuntu ibizwa ngokuba yi-CMUS, a «Isidlali somculo esincinci esikhawulezayo nesinamandla senkqubo yokusebenza kwe-Unix«.
I-CMUS ingaphatha uninzi lweefayile zomsindo kwaye inokuqwalaselwa ukuba isebenze kunye neenkqubo zokuphuma komsindo ezinje ngePulseAudio, Alsa, kunye noJack.
Su ujongano lunomdla, ukuba eminye imiyalelo iyaziwa ukuba singabonisana nomyalelo "manus cmus", ngaphandle kwezicatshulwa, kwisiphelo sendlela. Ndiyishiya apha, ndingomnye wabo bakhetha imouse kunye nesikhombisi.
Ukufaka i-CMUS, vula nje itheminali kwaye uchwetheze umyalelo I-sudo ifake ukufaka i-cmus
Amarok ngu Umdlali osisiseko kulwabiwo oluthile usebenzisa imeko yemizobo esekwe kwi KDE. Emva kweminyaka emininzi usebenzisa MediaMonkey, umdlali endimsebenzisileyo emva kweWindows Media Player (ngaba ibizwa njalo?), xa nditshintshela kwiLinux yonke into ibonakala incinci kum. Umcebisi wam weLinux, ondincede ndaqala ku-Ubuntu (molo Joaquin Joa), undixelele ngeAmarok. Kuqala ndathandana, kuba into endiyifakileyo ngokungagqibekanga ku-Ubuntu (andikhumbuli ukuba yintoni) yayisazi okuncinci kum kwaye iAmarok inokhetho oluninzi njengoClementine okanye nangaphezulu. Mhlawumbi ukhetho oluninzi luphele lundidinisa, kodwa lo mdlali ugqibelele kwabo bangafuni kubingelela nto.
Ukufakwa komyalelo: I-sudo ifake ukufaka i-amarok
Kwaye ukuba i-DeaDBeeF ikwazile kancinci, iRhythmbox, uClementine kunye neAmarok kakhulu kwaye i-terminal ayisiyonto yakho, mhlawumbi into oyifunayo ibizwa ngokuba yi-Audacious, a umdlali ongasindi, inamandla kwaye ngaphandle kokhetho oluninzi olunokugqibelela ukuba into esiyikhangelayo, umzekelo, kukudlala ifolda egcwele iifayile zeMP3.
Ukuyifaka, kufuneka sivule i-terminal kwaye sichwetheze umyalelo I-sudo ifake ukufaka uhlolo
Nguwuphi umdlali wakho womculo owuthandayo kuBuntu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » Abadlali abaMculo abahlanu abaphezulu boBuntu
USawule castro sitsho
Phendula uSawule Castro
UKrack Garcia sitsho
Phendula uKrack García
IProteus Force Ten sitsho
Phendula kwiProteus Force Ten
UJavier Pazos umfanekiso wokubamba sitsho
Phendula kuJavier Pazos
Usetyenziso olungakumbi nge- Даниил Леонель sitsho
Phendula u Даниил Леонель
IGuayadeque inamandla amakhulu kwaye iyasebenza .. jonga kwi-gayayadeque.org (ephuhliswe ngumSpanish, ngakumbi iCanary) uguqulelo olusanda kukhutshwa 0.4.3.
Ndiza kujonga kwi-DeaDBeeF (foobar2000 ithi konke), enkosi
UJack daniel sitsho
Phendula kuJack Daniel
UEnrique de Diego sitsho
Ndisebenzise kuluhlu lweRythmbox (kwaye andizukuyibiza ngegama iBanshee ... yayikukuyicima njengo-Ubuntu efakwe kwezi nguqulelo zazinayo), uClementine, Amarok, CMUS kunye no-Audacius.
Ngokwenyani phakathi kwezi kwaye ndiqinisekile ukuba ezinye endingazisebenzisanga okwangoku (i-DeadBeef) kolo luhlu zihlekisa kwaphela ukuxoxa. Nokuba sibeka i-Audacity (intle kakhulu kodwa inzima kwaye ayisiyoyolo yobuhle) kwiqela, sinokulungela imiba eyahlukeneyo yokuqaqambisa eyenza ukuba ikhetheke:
I-Rythmbox: Ilula kakhulu kwaye inamanzi aguquliweyo, ngakumbi nangakumbi, kwi-Ubuntu interface (iGnome kunye nobunye).
UClementine: Ngokuchanekileyo ngokufanayo neRymboxbox. Inikezela ngolwazi oluthe kratya malunga nomculo kwaye inezixhobo ezisebenzayo ngokuchasene nawo.
I-Amarok: Ingcuka izala kwakhona (phantse ukuba ayisiyiyo yonke into) intle kwaye ndingazivumela ubunewunewu bokuthi akukho mathandabuzo oyena mdlali weFLAC ubalaseleyo kwezi. Isandi esicoceke kakhulu kwaye esimiselweyo. Into enzima ukwenziwa kwayo kunye nokusetyenziswa kwayo, nangona irhamncwa elipheleleyo.
I-CMUS: Umdlali onamandla kwaye okona kulula (okulula) kuzo zonke. Inzima kancinci njengoko ingeyiyo eyokunxibelelana, kodwa ayidanisi kwaphela kwiinguqulelo eziphilayo kunye / okanye ii-S.O ezindala / ezingasasebenziyo kwiitheminali ezinamandla.
Uphicotho-zincwadi: Yeyona nto ixoxwa kakhulu ngabasebenzisi beAmarok ekusebenzeni ngeendlela ezahlukeneyo. Umdlali opheleleyo oyinyaniso kunye nomhleli. Eyona nto imbi kukuntsokotha kweenketho zayo ezingapheliyo kunye nesimbo sayo esingathandekiyo.
Audacius: Umdlali omncinci osekwe kwiWinamp. Inokulingana kunye noluhlu lokudlala, olunokwandiswa ngee-addons kunye nezikhumba ezinokwenziwa ngokwezifiso kwiigalari (Ubugcisa beGnome / Jonga phakathi kwabanye).
Ngokuqinisekileyo, indlela yokuziphatha komntu ngamnye ngokubhekisele kwenye inokubuzisa KAKHULU, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo akukho namnye ungcono kunomnye kwinto abayinikelayo kwaye umsebenzisi ujonge ikakhulu.
Ndiza kufaka epakethini isiqwenga somdlali kwiWindows (i-AIMP 2), kodwa kufuneka kuthiwe ukusebenza kwayo akulunganga kakuhle njengokuba kunjalo efestileni okwangoku kwaye ayenzi njengoko umntu elindele.
Phendula u-Enrique de Diego
Gaston zepeda sitsho
IVLC yeyona ilungileyo
Phendula uGaston Zepeda
Umxube weMauricio Torres Dj Mao sitsho
UClementine kunye neAmarok zezona zibalaseleyo kwaye ngokuqinisekileyo iVLC ihlala ilungile ukuba nayo. Kukho enye elungileyo kwaye ibizwa ngokuba yi-Tuna, yile web http://www.atunes.org/
Phendula uMauricio Torres Dj Mao Umxube
Ibhokisi yeMiquel Lluch sitsho
Ndisebenzisa ngaphezulu kwakhe nabani na uClementine, ngamanye amaxesha neRhafu
Phendula iMiquel Butet Lluch
Kunyaka odlulileyo ndadibana nomdlali we-Sayonara kwaye ukusukela oko ndayifaka apho ihleli khona, inayo yonke into efuna ukuba nayo, iyakhawuleza kwaye inoluhlu olunamandla. Kuya kufuneka uyizame:
Ngaphambili, enye enkulu yakhankanywa, eyiGuayadeque, nangona okoko ndadibana noSayonara andikhange ndiyisebenzise.
Molo, leillo1975. I-Sayonara ndiyayithanda: ilula, inembile kwaye ayinangxaki zininzi. Kwaye kuyilo olufanelekileyo. Ndizokuyisebenzisa okwethutyana ukubona okwenzekayo.
UAbraham Rodriguez sitsho
Enkosi leillo1975 ngengcebiso, ndikhuphele umdlali we-Sayonara, intle kakhulu kwaye ujongano olugqwesileyo. Isadinga izinto ezithile, kodwa iyahamba kakuhle. Nangona ukukhangela kwefayile ngaphakathi kwesikhombisi kungakhange kundisebenzele. Ukuba bendinqumle phakathi kweetraki kunye nokhangelo olusebenzayo, ibiya kuba ngumdlali ogqibeleleyo kum. Kudala ndisebenzisa uClementine iminyaka eliqela, kodwa ujongano alukatshintshi konke konke, luyaphelelwa lixesha, kodwa ngokubhekisele ekusebenzeni, andikamfumani umdlali olunge ngakumbi, uSayorana akakude kuyo. Ndiyabulisa!
Phendula uAbraham Rodriguez
Zonke zineefayile ezingama-90 zokujonga iifayile
Ke yeyiphi oyicebisayo kuyilo oluhle olunomtsalane olungakhange lubuke i-90s?
Ndisebenzisa isidlali seNightingale, liqonga elinqamlezileyo, elinokwenziwa ngokwezifiso, kwaye linokuphuculwa ngokusebenzisa iiplagi. Ikuvumela ukuba ulawule ngokulula kwaye uququzelele ilayibrari yakho yomculo.
Ndicela uncedo lwakho. Ndizamile uClementine kuba iRythmbox iyekile ukusebenza kakuhle. Ngokukodwa, ikhonkco kwi "umculo" yebar esecaleni xa ucofa kuyo AKUFUNI ukungenisa ifolda okanye ifayile.
Itotali engangenisi iifayile zethala leencwadi «umculo»
Ndiyifakile kwaye ndayikhupha, ndayihlambulula, amaxesha amaninzi ukuvavanya, kodwa akukho nto.
Ke ukuba niyandinceda mhlawumbi ninamathele kwiRythmbox.
Ndiyakubulela kwangaphambili. Ungathumela impendulo kwi-imeyile yam
UDell uqala ukwehlisa ixabiso leekhompyuter zakhe nge-Ubuntu
Uyenza njani Ubuntu ngokuzenzekelayo ifake ii-patches zokhuseleko